Chocolate Kuisa muchina, Chcolate Kuumba Muchina, Chokoreti Enrobing Machines - LST Technology Co., Ltd.
Chocolate Inonyungudika Tempering Machine
Yakagadziriswa Inowedzera Machine
2019 New Custom Polycarbonate Chocolate MAUMBIRWO P ...
Popular Zvigadzirwa Polycarbonate Chocolate MAUMBIRWO ...
High Quality Custom Chocolate MAUMBIRWO PVC Chocola ...
Wepamusoro Yemhando Diki Simba Remagetsi Chokoreti ...
Yakakwira mhando SS304 zvinhu 4-6 maawa anonatsa ...
Small uye svikiro kugadzirwa fekitari motokari choco ...
Otomatiki almond makorari muchina wekudya pro ...
Yakavambwa muna2009, iri muChengdu China, yakanangana nemhinduro yakazara yekugadzira chokoreti chikafu uye kurongedza.
Imwe yemakambani mashoma ayo akasarudzika mune diki / epakati / hombe chokoreti kuisa tekinoroji muChina Iyo muvambi webhandi mhando / muhombe-dhiramu chokoreti shuga upfu unhani uye polishing tekinoroji,
Mashanu epamusoro tekinoroji yekutsvagisa uye ekuvandudza matanda sechikwata muChina. Matekinoroji matatu akasiyana epamusoro uye matsva anoitwa gore rega rega kuChina. Nyika makumi mana zvirinani kuti dzishande pamwe sevanogadzira chokoreti venyika yose neChina. OEM sevhisi uye yakazara-yehupenyu-nguva yekutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi.
Isu tiri kupa mhinduro yese yemuchina wekugadzira chokoreti, Muchina wedu unoshandiswa bhisikiti, chikafu chinwiwa & chinwiwa fekitori, Bhekari, Mahotera, Restaurant, Kushandisa Kumba, Maindasitiri uye ezvigadzirwa chokoreti kugadzirwa, ice cream parlors uye zvitoro zvechokoreti zvichingodaro, anokwanisa kuburitsa akawanda mhando dzakasiyana dzemhando yepamusoro chokoreti macandi
● Zvakanaka kuburitsa chokoreti chaiyo, yepakati-yakazadzwa chokoreti uye crispy mupunga chokoreti, ine chaiyo yekudurura huwandu, hwakakwira hunowanikwa uye nyore kushanda
● Cold Press inyowani nyowani yepamusoro michina inogadzira yakakwira mhando chokoreti mukombe zvigadzirwa
● Inokodzera mupunga weCrispy, nzungu, Red beans truffle, green bhinzi truffles chokoreti.
● Inogona kusanganisa chokoreti, nati ruomba, michero, kana zviyo nezvimwe zvinodyiwa; zvigadzirwa zvechigadzirwa zvakasiyana uye zvinogona kugadzirwa
● Iyo 3D mhango chokoreti zvigadzirwa zvine zvakakwirira zvehunyanzvi kukosha uye yakawedzera hupfumi kukosha kwavo kwekugadzira dhizaini uye akanaka maumbirwo.
: Isu takura mutengi.Ichi ndicho chakanakisa pakati pechigadzirwa chakabatana ini chandinotengesa. Maitiro avo ebasa zvakare akanaka, Havana kuyedza kunonoka kuendesa.Zvakanaka chaizvo.
-J ** l (Nyika dzakabatana)
: Yakavimbika fekitori
Kuchengetwa kwemunda uye basa rekugadzirisa, iyo yekuchenesa iri nyore, ndinonzwa kugutsikana